Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): Russian Mine to Supply Uranium to Junta?
The idea thataRussian firm might be quietly mining uranium in the country is by no means so far-fetched.
သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ | တောင်ကြီးတိုင်းမ် ပအိုဝ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (Pa-O University Old Students Organization) ကို တောင်ကြီ...
၁၉၆၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးသိမ်း ဦးဆောင်သော တိုင်းရင်းသား စာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီကို ရန်ကုန်တက္ကသို...
တောင်ကြီးတိုင်းမ်။ နောင်ခမ်းခါ ဇွန်လ (၂၄) ရက်၊ ၂၀၁၀။ ကျာသပတေးနေ့ နှစ်သင်းစလုံးခြေမသိမ်းမယိမ်းနဲ့ သူဘက် ကိုယ်ဘက်အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဆင် ဖိက...